नयाँ मेटल हैंडल आंखेडो आँखाको ब्रश China Manufacturer
विवरण:आँखा छाया ब्रश महिलाहरुको लागि,सिंथेटिक प्रसाधन सामग्री ब्रश,विविधता मोडेलिंग मेटल हैंडल मेकअप ब्रश
Home > उत्पादनहरू > ब्रश सेट > 5pcs ब्रश सेट > नयाँ मेटल हैंडल आंखेडो आँखाको ब्रश
नयाँ मेटल हैंडल आंखेडो आँखाको ब्रश
मोडेल संख्या: YC025
धातुलाई आँखा छाया ब्रश ब्रह्मा ब्रशले तपाईंलाई धातुको मोटो भावना प्रदान गर्दछ, बनावटबाट भरिएको हुन्छ
परिवर्तनशील मेला आकारले शहरी महिलाहरूको आकर्षक र आकर्षक देखाउँछ।
यो आँखा ब्रश संग, तपाईं आफ्नो स्त्री स्त्री को पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो श्रृंगार ब्रश उच्च गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्य संग छ, हाम्रो श्रृंगार ब्रश विभिन्न उत्कृष्ट डिजाइनहरु, सुन्दर उपस्थिति जस्तै, हाम्रो उत्कृष्ट कारीगरी र पेशात्मक टीम संगै, श्रृंगार ब्रश दुनिया भर मा र राम्रो प्रतिष्ठा संग निर्यात गरिन्छ। एक मेकअप ब्रश खोज्दै, योआका तपाइँको उत्तम छनौट हो र हामी प्रचुर मात्रामा विश्वास छ जुन तपाईं हाम्रो मेकअप ब्रशसँग सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। र हामी लोगो रंग, आदि सहित मेकअप ब्रश आवश्यकताहरु अन्तर्गत बनाउन सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि समयमा हाम्रो श्रृंगार ब्रशसँग राम्ररी स्वागत गरौं!
मेकअप ब्रश सफा गर्ने कसरी
उत्तम परिणामहरूको लागि यी तीन सरल चरणहरू पछ्याउनुहोस्:
चरण 1: हल्का शैम्पू वा ब्रश क्लीनर प्रयोग गरेर तपाईंको ब्रश धोई।
चरण 2: कुनै अतिरिक्त पानी हटाउनका लागि बिस्तारै ब्रस्टेल्सहरूलाई थिच्नुहोस्।
सानो आकारको ब्यान्ड प्रयोग गरी ब्रशमा फिट हुनेछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै ब्रिस्टल दृढतापूर्वक संकुचित हुन्छन्।
चरण 3:4देखि6घण्टा पर्खनुहोस् र तपाईंको ब्रश भरि र प्रयोग गर्न तयार हुनेछ!
पूर्णतया सूखी हुनुको अतिरिक्त, ब्रिस्टलहरू आफ्नो मूल रूपमा पुनःनिर्धारित गरिनेछ।
प्याकेज ग्राहकको आवश्यकताको रूपमा बनाइनेछ।
प्रत्येक ब्रशमा ओपीपी थलो छ।
हामी OEM / ODM स्वीकार गर्छौं।
ग्राहकको लोगो स्वीकार्य छ.तपाईं मेकअपको लागि कुनै विचार छ। केवल हामीलाई भन्नुहोस्
उत्पादन कोटीहरू : ब्रश सेट > 5pcs ब्रश सेट
व्यावसायिक प्रिमियम प्रसाधन सामग्री अब सम्पर्क गर्नुहोस्
विशेष5पीसीएस मेकअप ब्रश कैंडी को हैंडल संग अब सम्पर्क गर्नुहोस्
मिनी मेकअप ब्रश पोर्टेबल सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
नयाँ मेटल हैंडल आंखेडो आँखाको ब्रश अब सम्पर्क गर्नुहोस्
इंद्रधनुष शिनी प्रीमियम मेकअप ब्रश अब सम्पर्क गर्नुहोस्
आँखा छाया ब्रश महिलाहरुको लागि सिंथेटिक प्रसाधन सामग्री ब्रश विविधता मोडेलिंग मेटल हैंडल मेकअप ब्रश मेकअप ब्रश महिलाहरुको लागि सुन्दर रंग मेकअप ब्रश लडेई को लागि एकल मेकअप ब्रश संग उच्च गुणवत्ता उच्च गुणस्तर ब्रश सेट प्रसाधन सामाग्री को लागि मेकअप ब्रश सेट गुलाब गोल्ड